Ataovy ny rindrina ity metatra toradroa ity, manatsara ny endriny!
Home / Interior design / Ataovy ny rindrina ity metatra toradroa ity, manatsara ny endriny!
2020 / 10 / 23 FisokajianaInterior design 1167 0
Mihamaro ny fianakaviana tanora mandà ny fitoviana ary maniry ny hamorona ny maha izy azy raha ny fanaingoana ny tranony manokana.
Tao anatin'izay taona faramparany izay dia nahatsikaritra aho fa misy onja misy andohalambo, izay niainga tamin'ny maritrano romana, dia nipoitra mangina tamin'ny famolavolana trano.
Tany am-boalohany, io firafitry ny andohalambo io dia be mpampiasa tamin'ny andro taloha satria ny haben'ny be indrindra mihoatra ny enta-mavesatra entin'ny rafitra iray.
Ankehitriny, matetika izy io dia hita amin'ny endrika ivelany sy anatiny amin'ny endrika tranobe.
Ohatra, ao amin'ny "Hidden Corner", izay nahavoa be taloha kelin'izay, na ny andohalambo ny fidirana amin'ny efitrano misavoritaka na ny vavahady mankamin'ny faritra ao an-dakozia dia mitondra fahatsapana fiotazam-boaloboka.
Ny hakanton'ireo tsipika geometrika, ampiarahana amin'ny loko miloko nofinofy, dia tian'ny mpamorona amin'ny karazan-karazany rehetra.
Ity famolavolana ity, izay nalaza vetivety tamin'ny taona 80/90, dia tena niverina indray androany.
Ary, ny famolavolana ny andohalambo nohatsaraina dia tsotra kokoa, mateza kokoa ary atambatra amin'ny fahaizana lehibe kokoa. ......
Amin'ity fizarana anio ity dia hiresaka zavatra vitsivitsy aminao izahay - inona no tena manintona momba ny andohalambo ka mendrika ho an'ity fironana ity hanohy hamerina amin'ny laoniny ny lazany.
1: Miasa amin'ny lamaody rehetra ve ny andohalambo?
2, Inona avy ireo faritra marobe ampiharina amin'ny andohalambo eo amin'ny sehatra anatiny?
3, Arch manangana mety sy ny fandinihana ny vidiny
Afaka mampiasa arches amin'ny style rehetra ve ianao?
Noeritreretiko kely ity fanontaniana ity, ary ny valiny dia - kinda.
Na dia ny eropeana, frantsay, mahazatra aza, ny fomba maoderina dia ho hita matetika ao amin'ny arisko. Fa amin'ny fampiharana, japoney ambany-key, amerikanina atmosfera, dia manao famolavolana arko.
Ity manaraka ity dia ny fidirana ao an-tranon'ny vehivavy mpikarakara tokantrano Japoney, ary io dia zana-tohatra toy ny fitahirizana kabinetra. Volavola mirindra sy miloko izy io.
Ohatra iray hafa, ity tsangam-bato amerikana ity dia novaina arakaraka ny toeran'ny andry sy andry voalohany. Nihamalemy ny tara-pahazavana, saingy misy fizarana habaka habaka.
Amin'ny farany, ny andohalambo dia azo ampiasaina amin'ny fomba isan-karazany noho ny zavatra ataony.
Voalohany, manalefaka ny zoro izy io ary manalefaka ny zoro amin'ny habakabaka.
Faharoa, ny teboka avo indrindra amin'ny andohalambo dia akaiky kokoa ny valindrihana, izay mahatonga azy ho lava kokoa noho ny mahitsizoro.
Fahatelo, ny arofenitra dia fitambaran'ny lamina geometrika marobe izay mahatonga ny endrika hahaliana sy kanto kokoa noho ny mahitsizoro tokana.
Aiza no azo ampiasaina andohalambo ao an-trano?
Aorian'ireo tombony rehetra, rehefa tena mila manomboka manamboatra azy ianao dia mbola bevohoka ny zaza maro: misy ve ny andohalambo mora indrindra azonao noforonina izay mora ny miasa ary tsy mety diso?
Miaraka amin'io tanjona io ao an-tsaina dia nandamina zavatra vitsivitsy aho, koa andao jerena ny faritra iraisan'ny fampiharana ny andohalambo ao amin'ny habakabaka anatiny.
Ny zavatra mora indrindra tokony hatao, ny zavatra tonga ao an-tsaiko voalohany dia ny lalantsara ao an-tranoko.
Na ny làlana fidirana.
Mbola ny lalantsara amin'ny lalantsara, miaraka amina fiolahana, dia mahatonga ny habaka fifindrana ho malemy kokoa sy ho akaiky kokoa.
Ity villa super ity, ny lalambe eo anelanelan'ny efitrano fisakafoanana sy ny efitrano fandraisam-bahiny dia mampiasa andohalambo roa alohan'ny sy aorin'izay, izay tsy dia miseho lany andro, fa manampy fahalianana ihany koa.
Ary ity karazana antsasaky ny andohalambo + loko ity, ny fahatsapana endrika dia ho matanjaka kokoa, mila fahatsapana hatsarana bebe kokoa hanohanana.
B. Varavarana misokatra
Ny tetezamita tena mitovy amin'ny lalantsara etsy ambony dia ny varavarana misokatra amin'ny efitrano sasany.
Ohatra, ity efitran'ankizy ity izay tsy mbola ho varavarana akory. Raha ny tonony volondavenona ety ivelany, dia boribory misy zana-baravarana fotsy no nentina niditra tao amin'ny habakabaka anatiny, izay mahaliana ary manome tetezamita voajanahary.
Misy ihany koa ity karazana lalimoara ity miafina ao amin'ny efitranon'ny efitrano fandriana, izay mety tsara ihany koa ho an'ny varavarana misokatra.
Raha tena tsapanao fa somary sarotra ny varavarana misokatra dia azonao atao ny mianatra izao manaraka izao - ampio ambainy! emmm… mahaliana kokoa ny fanakanana ny loko.
Aza adino ny mametraka ny lambam-baravarana amin'ny sakan'ny mason'ny lafiny kely kokoa, vonjeo ihany koa ny vokatra, satria ny "zoro miafina".
C. Doors Ary Windows
Ny olona sasany hiteny hoe, efa manao vavahady, maninona tsy manamboatra varavarankely sy varavarana? Fa angaha tsy arovitra kokoa ny fanaingoana aris + toy izao?
Marina izany, afa-tsy… ny varavarana sy ny varavarankely dia mazàna no ampiasain'ny milina, ary sarotra be ny mahita mpamokatra manao ireo famaritana miolakolaka ireo. Na dia hitanao aza izy ireo, dia somary lafo kokoa noho ny varavarana antonony izy ireo.
Indrindra raha mifanaraka amin'ny eritreritrao ny loko sy ny fomba, dia sarotra ny mahita azy.
Raha te hahita varavarana fisaka tsotra sy mahaliana toy ilay etsy ambany dia mila mandany fotoana bebe kokoa ianao hahazoana antoka fa manana iray.
Noho izany, raha mitady varavarankely na varavarana ianao, dia mety ho manohana kokoa ilay etsy ambany aho, izay endrika mahitsizoro mahazatra fa misy singa misy andohalambo ao anatiny.
Averina indray fa ny sandan'ity karazana varavarankely ity dia avo ihany koa.
Raha ny marina, ity karazana aseho fampirantiana akany ity dia tsotra ihany koa noho ny varavarankely sy ny varavarana, mitovy amin'ny tetezamita sy ny varavarana misokatra etsy ambony. Hiresaka momba ny fomba hanaovana an'io eo ambany isika.
Na haingon-trano na fampirantiana talantalana, dia mbola tena tsara tarehy.
Indrindra raha miharo ny loko sy ny any ivelany, dia hamorona endrika telo refy izany.
E.Gabinet vita anaty
Misy ihany koa ny fandidiana toy ny akany, saingy amin'ity indray mitoraka ity dia ny kabinetra ny tena vatana.
Satria ny kabine dia amin'ny ankapobeny somary lalindalina kokoa noho ny niches, dia mifanaraka tsara kokoa izy ireo hatao ho faritra miasa rehefa arched.
Ny biraon'ny birao kely etsy ambany, ohatra, dia mamiratra. Tsy miankina ihany koa io.
Ny fandidiana manaraka, etsy ankilany, dia mbola cerebral kokoa ary mifanaraka amin'ny toerana kely.
Ao anaty rindrina fitehirizana iray, nisy andohalambo roa nohadina.
Iray tafiditra ao anaty latabatra fisakafoana.
Sofa miaraka amina booth built-in.
Mamita ny fihodinana mahafinaritra amin'ny efitrano fisakafoanana ho an'ny vahiny
F. Fandriana ho an'ny ankizy
Misy ihany koa ity famolavolana ity izay mety tsara ho an'ny efitranon'ny ankizy.
Mety tsara ho an'ny fianakaviana manan-janaka roa izy io, ary ny fandriana amin'ny farafara vita amin'ny andohalambo dia sarobidy imbetsaka mihoatra ny fandriana avo / ambany mahazatra.
Misy ihany koa ny efitranon-jaza mihady lavaka mihalehibe izay mamorona faritra filalaovana mivantana.
Raha fintinina, ny endrika mahaliana an'ny andohalambo dia mifanandrify amin'ny efitranon'ny ankizy.
G. Fitaovana malefaka
Ireto manaraka tapam-bolo telo manaraka ireto dia azo atao kely na tsy mila miantso olona matihanina, amin'ny alàlan'ny fividianana vokatra efa vita ihany.
Ny voalohany tokony horesahina dia ny takelaka ambadika eo am-pandriana.
Ity iray ity matetika dia voafantina manokana rehefa misafidy fandriana, na afaka mahita orinasa misarona manamboatra fonosana malefaka.
Ary koa, ireto tranga fampirantiana arakitra ireto dia malaza be ankehitriny.
Raha manana fanaka efa vita ianao dia afaka mamorona karazan-trano kanto toy izao, azoko antoka fa olona maro no tsy hanadino izany.
Ny ambiny, ny fanao mahazatra indrindra dia ny mividy fitaratra arched mivantana, raha mety ny hahavony, toy ny varavaran'ny andohalambo fitaratra, dia tena mahavariana ihany koa ny vokany.
Ny fahatsapana ny arko
Farany, ny dingana azo ampiharina farany.
Ny laharam-pahamehana amin'ireo karazana arches voalaza etsy ambony ireo no mora ampiharina, raha tsy izany dia izany no izy.
Fitaovana malefaka ＞ Lalam-by sy lalantsara = varavarana misokatra displays Mampiseho an'i Niche ＞ Varavarana sy varavarankely ＞ Fampidirana kabinetra's Fandriana an-jaza
Averina indray, ny karazana tahan'ny vidin'ny asa / fampisehoana dia mitovy amin'izany.
Rehefa dinihina tokoa, arakaraka ny mahasarotra ny fampandehanana azy no hahabe ny fandaniana.
Afa-tsy ny ampahany malefaka, ny andohalambo dia mazàna aorina tsy misy fiaraha-miasa amin'ny mpandrafitra.
Ny firafitra anatiny mahazatra kokoa dia hofenoina na "board board to frame" na "plasterboard to form".
Sary avy amin'ny Zhiyou Xi'an Isochronous Design
Avy eo dia raharaha fotsiny ny fanaovana ny fitsaboana amin'ny rindrina amin'ny filaharana mahazatra.
Afaka manao an'io mivantana ianao, ary ny rindrina amin'ny loko iray - fotsy fotsy.
Azonao atao koa ny manampy loko amin'ny faribolana arched fa misaraka, izay telo-dimensional kokoa.
Misy ihany koa io fampiasana takelaka varavarana tery amin'ny alim-pito io izay tena mety amin'ny ankapobeny.
Raha fintinina, raha te-hilalao kanto kely ao an-trano ianao, dia safidy tsara ihany ny andohalambo.
Raha mbola misy lavaka ao amin'ny ati-doha dia anjaranao ny milalao, tongasoa ianao handao hafatra ary hitantara izany amiko.
Loharanon-tsary ao anaty lahatsoratra.
Previous :: Minimalism maivana sy mihoapampana dia aestetika avo lenta! Next: 50 Metatra toradroa amin'ny haavo maoderina maoderina, mety hitranga tsy voafetra | JUDESIGN House Union Design